Nisafidy ny fahatsaram-piainana i Josefa, tsy mba toa izany i Samsôna
"Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo; ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny Fanahy." Gal.6:8
Fakam-panahy vitsy ihany no mampidi-doza sy manimba kokoa ny tanora mihoatra noho ny fakam-panahy hanaraka ny filan-dratsy. Tsy misy amin’izy ireo anefa no miharihary avy hatrany ho manimba mandrakizay ny fanahy sy ny vatana. Tapaka noho ny fanapahan-kevitra vao noraisiny vetivety teo ny fanambinana tokony ho azy any amin’ny hoavy iray manontolo. Nanopy ny masony tamim-pahatoniana tany an-danitra i Josefa mba hahazo fanampiana, navelany hiala teny aminy ny fitafiany ivelany efa nivaha. Navelany ho eny an-tanan’ilay mpaka fanahy azy izany ary raha mbola hita taratra teny amin’ny fijeriny ny fahavononana hijoro hatrany manoloana ny filan-dratsy tsy masina, dia hoy izy, “Hataoko ahoana no hanao izany, ratsy lehibe izany ka hanota amin’Andriamanitra?” Azony ny fandresena; nandositra ilay mpaka fanahy izy; avotra izy. - SDABC 1:1097.
Ilay loharanon-kery nananan’i Josefa ihany no loharanon-kery nananan’i Samsôna tao anatin’ny toe-javatra mampidi-doza nisy azy. Raha tokony namikitra tamin’ny herin’Andriamanitra izy, dia navelany nangeja azy tanteraka ny filan-dratsy mahery vaika teo amin’ny toetrany. Nihasimba ireo fahafahana mamantatra ny tsara sy ny ratsy ary nihanitotongana koa ny toe-panahy. Efa niantso an’i Samsôna ho eo amin’ny toerana misy andraikitra goavana sy voninahitra ary fahombiazana Andriamanitra. Tsy maintsy mianatra mitantana aloha izy voalohany indrindra, amin’ny fianarana mankatò ny lalàn’Andriamanitra (...) Namela malalaka ny filan-dratsy hanjaka tao aminy i Samsôna tamin’ny nanekeny ny fakam-panahy handresy azy. Ny làlana nofidiny dia nitondra fiafarana feno henatra sy loza mahatsiravina ary fahafatesana ho azy tamin’ny farany. Mifanohitra amin’ny tantaram-piainan’i Josefa tokoa ny ohatra nasehony! - ST, 13 Oktôbra 1881.
Eo anivon’ireo fandrika manoloana antsika rehetra, dia mila miantehitra amin’ny fiarovana mafy sy azo antoka izy ireo (...) Afaka miaro izay rehetra tsy resin’ny fakam-panahin’ny fahavalo ny ampingan’ny fahasoavana na dia manodidina azy ireo aza ny hery miasa mangina manimba indrindra. Amin’ny fanarahana fitsipika mafy orina sy fitokiana tsy miovaova amin’Andriamanitra no hamirapiratan’ny fahatsarana sy ny fahamendrehan’ny toetrany, hany ka na dia manodidina azy aza ny ratsy, dia tsy ho voampentina akory ny fahatsaran-toetrany sy ny fahatokiany. - 3SG, tt. 145,146.